Xiligan Doorasho Lama Qabankaro! 6 Billood wax kabadanna Lama Kordhinkaro (Yaasin Maxed Xuseen ) | CeelGardi News
Xiligan Doorasho Lama Qabankaro! 6 Billood wax kabadanna Lama Kordhinkaro (Yaasin Maxed Xuseen )
January 8, 2017 - Written by admin
Berbera (Ceelgardinews.com) Waayo dalka abaar baahsan ayaa ka jirta oo ubaahan in qaylo dhaan degdeg ah madaxweynuhu ku amro dhamaan laamaha dowladda, ganacsataadda, ururadda caalamiga ah iyo kuwa muxaliga ahba iyo cidkasta oo wax kudhaanta dadka abaartu saamaysay inay kaalmo kagaystaan wixii awoodoodda ah.
a)- in qorshe qaran laga yeesho sidda loo qaabilayo dadka xooluhu kabexeen!
b) – in qorshe iyo nidaam sax ah loo marro Qaabka Dadka loogu gurmanayo iyo xaqiijinta gaadhista dadkii loogu tallo galay!
c) in lasameeyo gudi farsamo oo isu xilqaantay suurtogelinta nadaamku habboon waxqaybinta iyo dabagalka xaqiijinta nadaamkii loodejiyey qaybinta iyo gaadhsiinta taakuladda abaaraha!
d)- inay dowladdu mabnuucdo dhamaan kharashaadka dheeriga ah ee ay isticmaalaan madaxda iyo maamuulka dowladu ee uu kamid yahay shiidaaladda, iyo waxyaalaha aan lama maarmaantka ahayn si loogu bixiyo qaadhaanka abaaraha muddo kooban!
2. Waayo haddii muddo kordhintu noqoto hal sanno (1year) waxay kubeegmaysaa xiligan xiligeedda oo ah March 2018, xiliga loodiyaargaroobayaanna January iyo February 2018 oo ay ku beegantahay xili Jilaal ah sidii caadiga ahayd. (Xaga illaahay oo Roob inooga dhiga mooyee) taasinna waa mudo kordhinkale uun. Sidaas darteed 6 billood ayaa macquul ah inlagu darro bes.